घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Sanchar Kendra
त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका उद्योगहरुको अवस्थाकाबारे लेखाजोखा गर्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार स्टील र डण्डी व्यवसायीहरुसँगको छलपलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसायीहरुको समस्या बुझ्न समिति बनाएर अध्ययन गर्न निदेर्शन दिएका हुन् ।
उनले बाहिरबाट आउने सामानहरु के हुन ? कर्मचारीको अवस्था के छ ? उत्पादनको अवस्था के छ भन्नेबारे बुझन निर्देशन दिए । सरकारले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थामा भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ नम्बरमा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशूल्क प्रति मेट्रिकटन १६५० बाट बढाएर २५०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
यस्तै, भाग ७२०३ अन्तर्गत स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगत फलामको पत्रु भन्सारदर पूरै छुट दिँदै अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
तर एमएस बिलेट ल्याएर डण्डी बनाउने उद्योगीले मूल्य नबढाएको बताउँदै व्यवसायीहरुले स्पञ्ज आइरन ल्याएर डण्डी बनाउने उद्योगीले नै रडको मूल्य बढाएको बताए ।